2019 CNS Kurapa Drug GM1 Pig Brain (37758-47-7) - APICMO
Chirapa > 2019 CNS Kurapa Drug Monosialotetrahexosylganglioside Sodium (GM1) Nguruve Ubongo (37758-47-7)
06 / 05 / 2019Posted by: APICMOCategory: Chirapa0 zvaanofarira
Tsvaga basa reGM1 muhutano hwehutano, hunopesana nokukwegura, uye mishonga yekliniki pamitambo yepakati uye yepamusoro yenheyo.
Chii chinonzi Monosialotrahexosylganglioside Solidum (GM1)
Monosialotetrahexosylganglioside sodium inonzi neurotrophic nutrient inoshandiswa GM1.
Gangliosides ndeyekirasi ye ganglio series, iyo inosanganisira glycosphingolipid ne sialic acid zvakasara pane shuga. Iyo chain sialated polysaccharide chain inobatana ne ceramide kuburikidza nehutano hwe β-glycosidic. Haisi kungogadzirwa mukati meNeuronal plasmic membrane asiwo mune endoplasmic reticulum.
Kunyange zvazvo vachigadzira 0.1% yehuwandu hwehuropi, gangliosides iyo inenge inenge 10% yehuwandu lipids. Vanoita kuti magetsi aparadzaniswe, apoptosis, neuroprotection, uye kusunungurwa kweeurotrophins.
Monosialotetrahexosylganglioside ishizha rinopesana rinoitwa neketani ye oligosaccharide uye ceramide. Iko molecule inoratidza zvose hydrophilic uye lipophilic properties. Kuva yakasvibiswa mumvura nemafuta, Monosialotetrahexosylganglioside inogona kufamba nyore nyore kuburikidza neropa reuropi.
Monosialotetrahexosylganglioside sodium GM1 ine basa rinokosha rehupenyu muuropi. Iyo inoratidzira neuroprotective zvinhu zvakadai sokugadzirisa zvinetso zvehutano, kushanda zvakanaka, nekugadziriswa kwemapuroni mushure mekukuvara. Nokuda kwechikonzero ichi, sodium Monosialotetrahexosylganglioside inobatsira mukurapwa kwekukuvara kwepfungwa. Zvimwe zvezvirwere zvakabatana zvinosanganisira kushungurudzika kweperebrospinal, kuora kwechisimba, uye kushungurudzika kwemasero cell kukuvara. Zvimwe zvacho zvinowanzofungidzirwa apo kune nerve yemaitiro yakaipa.
Nhoroondo yeSodium Monosialotetrahexosylganglioside (GM1)
Kuongorora GM1 uye basa rayo neuroprotection inodzokera kumashure e1970. Kubva panguva iyo, kutsvakurudza masayendisiti ave vakaratidza kufarira munharaunda kuburikidza nekuita tsika dzesero uye zvidzidzo zvemhuka. Zvose izvi zvakaongororwa pakugadzira kukosha kweGM1 muhutano hwehutano.
Muna 1986, kuburikidza neTrB SA, sodium Monosialotetrahexosylganglioside yakatanga kutumirwa pasi pezita rekutengeserana, GM-1. Zvichipa kuti migumisiro yezvidzidzo zvemhuka yakanga ichivimbisa, vanachiremba veUnited States vakabuda kuzoongorora Monosialotetrahexosylganglioside sodium (GM1) pamigumisiro yevanhu. Zvidzidzo zvekudzidza zvakange zvakaita varwere vane CNS kukuvara nemhaka yekukuvara kwemutsipa wepelinha, kurohwa, chirwere chePasinson, uye cheAlzheimer.
Kubvira panguva iyo, inotaura seArgentina neItaly yakabvumira kushandiswa kwayo kwechirwere semishonga yemishonga yekurapa kwemaurological conditions.
Sodium Monosialotetrahexosylganglioside(GM1)Structural Formula
Sodium Monosialotetrahexosylganglioside(GM1) Magadzirirwo
CAS Nha. 37758-47-7
Product Name Monosialotetrahexosylganglioside Sodium (GM1) Pig Ubongo
IUPAC Zita (2S,4S,5R,6R)-5-acetamido-2-[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,3R,4R,5R,6R)-3-acetamido-5-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-4-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-6-[(E,2R,3S)-3-hydroxy-2-(icosanoylamino)icos-4-enoxyl]-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-3-hydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-4-yl]oxy-4-hydroxy-6-[(1R,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]oxane-2-carboxylic acid
Solubility · Mvura
· Zvinyoro zvigadziriswa mumethanol / chloroform
• Inenge isina kushandiswa mune ethanol anhydrous
Kuonekwa Yakachena kusvika kune-white lyophilized powder
Storage Storage -20 ° C
Shelf Life Makore maviri
pH 5.0 kuna 6.5
Sodium Monosialotetrahexosylganglioside(GM1) Mechanism of Action
Monosialotetrahexosyl ganglioside inoshanda nenzira dzinoverengeka. The molecule is an epicenter of the most physiological activities of the system nervous.
Muchikamu chemukati cheuropi, mabasa eMonosialotetrahexosylganglioside kuchengetedza ion balance mukati nekunze kwemaviri akavharidzirwa. Hakusi chete kunowedzera kukanganisa, asi kunokonzerawo sodium uye calcium ions pump.
Mumamiriro ezvinhu ekukuvadza kwepfungwa, Monosialotetrahexosylganglioside sodium (GM1) inouya kuzochengetedza chimiro chemukati. Iyo inoderedza pasi basa re phospholipase A2, inotarisa calcium ion inopinda, uye inoderedza pasi kuumbwa kwemasimba ehurukuro.
Utano hwebongo hunoita kuti basa reprotini kinase riri mumasero, iro rinogona kunge rakagadzirirwa apoptosis. GM1 inhibits uye inodzokorora urongwa uhwu nokubata metabolism yeprotini mukati me cytoplasm uye nucleus.
Mukati mitochondrion, Monosialotetrahexosylganglioside inoshandiswa kusimudzira kushandiswa kweAtP uye basa rayo synthase. Iyo inogadzirisa zvinokanganisa zvinokonzerwa neketoni yekutakura ye electron uye inovandudza phosphorylation ye oxidative. Somugumisiro, uropi hwemitochondrial kupumha hunoita huri hutano hwakanaka.
Monosialotetrahexosylganglioside injection sodium inokurudzira axonal kumera nekuisa pfungwa dzekukura kune zvakagadziriswa. Basa iri rinovandudza marara emhepo uye rinokurudzira kupora kwehutano nekukurumidza. Muchiitiko chekudzikira kwechipiri, zvichida nemhaka yedambudziko re dopamine neuron, Monosialotetrahexosylganglioside ichasimbisa zvinoitika uye inosimudzira kupona kweeuroni idzi.
Monosialotrahexosylganglioside Solidum (GM1) Migumisiro
Kunyange zvazvo gangliosides ndiyo yakanyanya muuropi, mabasa avo akawanda kwazvo. Aya mamolekemu ane simba rakanaka pakukura, kuvandudzwa, kugadziriswa, nekuchengetedzwa kwemagetsi.
GM1 inorambana nezera. Kukwegura kunobatanidza nekushandiswa kwakanyanya kweuropi, kuchena kwechiedza, kuitika kwepfungwa dzenguva, kana kukanganwa kwepfungwa. Kunze kwekare, zvirwere zvakanyanya zvekare-kare zvakadai seperebral palsy, kurohwa, uye dementia zvinogona kuitika.
Nguva yakakodzera supplementation yeiyo inogadzirisa GM1 inobatsira kunyanya kushandiswa kwehutano hwekukwegura. Mamwe emhando dzakanaka dzeMonosialotetrahexosylganglioside sodium (GM1) zvinokonzera kusanganisira kurapwa kwechirwere cheAlzheimer, chirwere, kupera, uye cerebral palsy. Kunze kwekuti, kuwedzera kunoderedza kuchembera ne kuvandudza chiyeuchidzo.
Kushandiswa kweGG1 mumakiriniro ekugadzirira kunowedzera. Somuenzaniso, dzimwe nyika dzeEurope neAmerica dziri kutora monosialotetrahexosylganglioside injection sodium kuitira kutarisira zvirwere zveCSS.
Kuwedzera kunowedzera kukura kwemasero emagetsi, kukura kwehuropi maviri, nekudzivirira kwehutano hwehutano. Torapeutically, iyi inofanana nemakemikari inobata zvirwere zvepfungwa, kusuruvara kwechirwere, chirwere cheperemia, uye zvinokonzera kushungurudza masero.
Chimwe chinonyanya kukosha mukudzidza uye kushandiswa kwechikamu ichi pamusoro pevanhu chaiva nekuona kuti kwakanga kusina kuipa Monosialotetrahexosyl ganglioside sodium (GM1) migumisiro.
GM1 migumisiro haisi kungofungidzira chete. MuC1976, Ceccarelli yakasimbisa kuti yakawanda ye gangliosides inokurudzira pakati nepakadzika kushandiswa kwemasero nekugadzirisa kwemajeri akaora. Uku kuwanikwa kwakaisa nheyo yakasimba yevadzidzisi vairatidza kufarira kudzidza basa re GM1 mukati memutambo wenheyo.
Zvikamu zvezvipatara zvinomiririra zvinosimbisa kuti Monosialotetrahexosylganglioside inobatsira zvikuru pakukura, kusiyanisa, kubudirira, nekuvandudzwa kwemasero emagetsi. Uyezve, vanoongorora zvakare kubudirira kwe GM1 muurouroprotection, neuroplasticity, uye synaptic transmission.
Mukushungurudzika, kutora chirwere chakadai cheMonosialotetrahexosylganglioside sodium chinokanganisa urongwa hwemagetsi munzira dzakawanda. Iko molecule haingori kungoita kuti chizvarwa che dendritic chemasero emishonga asiwo chiwedzere kuwedzera kwehupenyu hwavo. Chechipiri, kuwedzera kune basa rinokosha mukugadzirisa, kushandiswa patsva, uye kushanda zvakanaka.
Kusvika zvino, Monosialotetrahexosyl ganglioside ndiyo chete chirongwa cheCS chinowanzoitika.
The molecule is ganglioside component, iyo inogara ichigadzirwa muNeural cell membrane yemakumbo. Pamusana pehuwandu hwehupfumi hwenyama, masayendisiti uye vanachiremba vakwanisa kuinyora nekuzvishandisa mukugadzirwa kwechirwere chemedicine monosialotetrahexose ganglion.
Tinotora monosialotetrahexosyl ganglioside kubva kumasero emamamalia. Kunyangwe iwe unogona kusunungura molecule kubva kune imwe nzombe kana mbudzi, nzira yakachengeteka ndeyekubvongodzwa kwevanguruve. Chikonzero chacho ndechekuti monosialotetrahexosyl chikwata chechigunha kubva kune nzombe kana mbudzi inogona kuendesa kutapurirana kune zvipembenene zvakadai semadhimoni-mhou uye epilepsy.
Zvigadzirwa zveMonosialotetrahexosylganglioside sodium (GM1) kubviswa kwebasa zvinosvikeka, zvinobudirira, uye zvekugadzirisa. Isu tinokupai neHIV1 yakachengeteka uye yakajeka kubva kubhomba yenguruve, sezvo nzira isingaparadzi zvirwere kuvanhu.
Pamusoro pezvibereko zvakakura, tinoshandisa chloroform-methanol-water extraction method. Mushure mekunge, tinoita shanduro ye anion uye kukura-kusagadzikana chromatographic kuparadzana. Iyi kuchenesa inobereka mamolekemu akafanana, iyo> 98% yakachena kuburikidza neHPLC.
Monosialotetrahexosyl mapundu emagetsi anonyanya kukosha mumashandiro emakiriniki. Iyo inogamuchirwa mishonga yemishonga yekugadzirisa zvirwere zvepfungwa uye kurapwa kwekukuvara kwekutambudzika.
Kunyangwe iwe uchida kutenga GM1 nokuda kwekushandiswa kwerapa kana tsvakurudzo yekutsvakurudza, isu tinokusimbisa iwe yepamusoro-bhizimisi mutengo. Isu tinorema-tinobereka Monosialotetrahexosylganglioside sodium (GM1) powder pasi pemitemo yakagamuchirwa yemitemo.
Schneider, JS, Roeltgen, DP, uye al. (1998). Zvirwere zvePacinsinson: Basa Rakavandudzwa NeGG1 Kuchengetedzwa kweGenlioside muChidzidzo Chine Rutivi-Chirongwa Chichidzorwa.
Bansal, AS, Abdul-Karim, B., Malik, RA, et al. (1994). IgM Ganglioside GM1 Antibodies muvarwere vane chirwere cheA autoimmune Neuropathy, uye Controls. Nhapfenyuro Clinical Pathology.
Mocchetti, I. (2005). MaGenliosides akadai, Neuronal Plasticity uye Repair, uye Neurotrophins.
Aureli, M., Mauri, L., Ciampa, MG, Prinetti, A., Toffano, G., et al. (2016). GM1 Gogolioside: Zvidzidzo zvekare uye Zvingaitika munguva Yemberi. Molecular Neurobiology.
Bian, L., Yang, J., uye Sun, Y. (2015). Isolation uye Kucheneswa kweMonosialotetrahexosylgangliosides kubva Pig Brain neUkuwedzera uye Liquid Chromatography.
pashure Previous mumhanyi; Zvose Zvaunoda Kuziva NezvePyridines